फोर्ब्सको सूचीमा परेकी प्रतिमा भन्छिन्, ‘कोरोनाले खुशी साँट्नै पाइनँ’ - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः दुई दिनयता प्रतिमा शेर्पाको मन उकुसमुकुस भइरहेको छ । उनी घरी सामाजिक सञ्जाल नियाल्छिन त घरी विश्वभरिका समाचारलाई पछयाइरहन्छिन् । उनको मन बसमा छैन ।
कल्पनामा डुबिरहन्छिन् प्रतिमा । कोरोना भाइरसका कारण अल्यासतल्यास भएकी छिन् । उनको शरीर अमेरिकामा त मन नपालमै छ । अमेरिकामा दिनप्रदिन बढ्दै गएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण प्रतिमा कहीँकतै निस्कन मिल्ने अवस्था छैन ।
याे पनि पढ्नुस कोरोनाको त्रास छ ? आत्तिनुपर्दैन, ध्यान दिनुस् यी १४ तथ्यमा !
फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको ३०० जनाको सूचीमा नेपालका छ युवा परेका छन् । उनीसँगै सूचीमा परेका निकिता आचार्य, किरण तिम्सिना, शुभाङ्गी राणा, जेसलिना राणा र रोहित तिवारी भने उद्यमी हुन् । बीस वर्षीया प्रतिमा मनोरञ्जन र खेलकूद विधामा २४औँ स्थानमा पर्न सफल भएकी छिन् । फोर्ब्स \_ले यो सूचीमा भविष्य परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्ने व्यक्तिलाई समावेश गरेको छ ।
उक्त सूची तीन हजार ५०० जनाबाट छानिएको हो । फोर्ब्स \_ले यस्ता व्यक्ति छान्नका लागि समिति बनाउँछ । बिहीबार राति फोर्ब्सको सूचीमा परेपछि नेपालमा रहेका उनका साथीले प्रतिमाले उक्त खबर सुनाएका थिए । त्यसयता उनको मन फुरुङ्ग भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस जरुरी कामबाहेक बाहिर ननिस्कन काठमाडौंबासीलाई आग्रह
‘चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल फर्कन पाए हुन्थ्यो जस्तो भएको छ’, अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट फोनमा कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘कोरोना भाइरसका कारण साथीभाइ र आफन्तलाई खुशी साँट्नै पाइनँ ।’ रासस
ट्याग्स: कोरोना, प्रतिमा शेर्पा, फोर्ब्स पत्रिका